Xilliga firaaqada iyo dhaqanka - Örnsköldsviks kommun
- Xilliga firaaqada iyo dhaqanka
Deegaanka dabiiciga iyo ururada xilliga firaaqada waa ku badan yahiin Örnsköldsvik oo taasna waxey badin fursadaha iyo martiqaadyo badan oo dadka kala duwan waxa ey xiiseynaayaan.
Isboortiyada waxaa xiiseeyo tiro badan oo bulshada Örnsköldsvik. Goobta lagu ciyaaro isboortiga barafka oo la dhaho Fjällräven Center waxaa ku ciyaaraan kooxda degmada oo la dhaho Modo ishockey oo ka ciyaaro heerka qaranka. Magaalada waxaa xitaa laga helaa dhowr garoon oo lagu ciyaaro kubbada cagta, kubbada usha, koorlina[curling] iyo garoonka la dhaho Skyttis oo isboortiyada sida orodka iyo kuwa barafka. Goobta dabaasha oo la dhaho Paradiset aad baa loo xiiseeyaa waxaa laga helaa daryeelka jirka iyo qolka ku leelka qiica.
Goobta dabaasha, barafka, iyo wadooyinka nalalka leh oo tababar ahaan lagu ordo waxaa laga helaa dhowr magaalo.
Meeshaa rabtid uga noolaaw degmada markasto wuu ku dhaw yahay dhulka oo deegaanka dabiiciga. Meeshaan waxaa ka heli wadooyin dhirta dhax maro ama lagu lo geynkaro, barafka lagu raacikaro iyo buuraha barafka. Bada, wabiyada iyo meelaha biyo mareenka oo laga dabi karo kaloon, lagu dabaalankaro iyo doono lagu wadankaro.
Xaqa guud oo deegaanka dabiiciga waa xaq ballaaran oo quseyo wada qeybsiga deegaanka dabiiciga. Laakin shuruud waxaa xitaa ah inaa anaga shaqsiyan mas’uul qaadno oo xushmeeyno dhirta, xayawaanka ku nool iyo deegaanka dabiiciga. Bogga internetka oo Wakaalada daryeelka dhulka dabiiciga waxaa adiga ka heleysaa xeerarka jiro. Warbixintaas waxaa ku heli dhowr luqadood oo kala duwan.
Magaalooyin badan baa laga helaa goobaha carruurta ku ciyaaraan oo diyactir lagu suubiyay oo waxaa laga heli miisas iyo kursiyo iyo barxad wax lagu dubto oo qoyska oo dhan baa wada joogi karo.
Goobaha xilliga firaaqada waxeey dhallin yarada iskugu imaankaran saacadaha fiidka. Meeshaa waxaa ka shaqeeyo shaqaalo oo hubinaayo iney meherada goobtaas tahay mid aan leheen mukhaadaraad. Haddii aad waalid tahay ku soo dhawoow oo booqasho ugu imaaw goobta xilliga firaaqada.
Goobaha xilliga firaaqada waxaa laga helaa Bjästa, Björna, Bredbyn, Domsjö, Gullänget iyo Husum. Dhex bartamaha Örnsköldsvik waxaa laga helaa goobta xilliga firaaqada oo la dhaho Sliperiet.
Rugta kutubta oo la dhaho Arkenbiblioteket oo ku taal Örnsköldsvik waxaa adiga ka diynsankartaa buugag oo dhowr luqadood oo kala duwan ku qoran, ka diynso filim iyo musiig, ka akhriso joornaalo iyo ka soo gal internetka. Carruurta waxaa loo suubiyan waqtiyo loo sheekeeyo, ruwaayado iyo dhaq-dhaqaaqyo kale oo horumarinta aqoonta akhrinta.
Rugta kutubta waxaa laga helaa Bjästa, Björna, Bredbyn, Husum, Själevad, Skorped, Trehörningsjö iyo dugsiga Nolaskolan iyo Parkskolan oo Örnsköldsvik.
Matxaf, farshaxan iyo musiiga
Degmada Örnsköldsvik waxey leedahay matxaf iyo goob farshaxan oo adiga kaga qeyb-qaadan kartid waxyaabaha la soo bandhigay iyo taarikhda deegaanka. Goobaha xusida taarikhda xaafada[Hembygdsgårdarna] waxaa laga heli dhaqamada aan dhaxalnay. Wadada oo meesha biyo mareenka oo la dhaho Nätra älvdal waxaa ku yaal High Coast Art Valley oo lagu sharaxay farshaxan badan oo deegaanka dabiiciga la dhax dhigay.
Markey noqoto ruwaayad iyo musiig waxeey leeyahiin lokaalo oo waxyaabaha laga helo ey kala duwan yahiin. Meesha Gideå waxaa si toos uga fiirsankarta ruwaayadaha yurubta kale ka socdo. Arrimaha dhaqanka oo Örnsköldsvik ka heleysid waxaa kuu sii dheer magaalada dariska nala ah oo Umeå kuwa laga helo.
Kamid noqo urur
Xafiska dalxiisaha waa talo iyo fikrad kaa siinkaro munaasabada soo codo iyo meelaha la booqankaro. Telefoonk: 0660-881 00.
Furantahay: isniin – jimco 10 ─17, sabti 10 ─ 15. Talooyin oo meelaha aad dalxiis u tagikartid iyo waxyaabaha la soo fiirsankaro oo laga helo Örnsköldsvik iyo Xeebta sareyso waxaa ka heleysiin www.hogakusten.com .
In laga mid noqdo urur waxey ahaan kartaa sida aad bulsho cusub ku barankartid iyo meesha cusub. Xafiska ururada baa kaa caawinkaro adiga urur aad ka heleysid dhaq-dhaqaaqyada adiga aad jeceshahay.
La soo xiriir xafiska ururada: 0660-882 15,